प्रधानमन्त्रीकै ट्वीटर असुरक्षित, क–कसलाई थाहा छ पासवर्ड ? प्रहरीले सुरु गर्यो अनुसन्धान « Deshko News
प्रधानमन्त्रीकै ट्वीटर असुरक्षित, क–कसलाई थाहा छ पासवर्ड ? प्रहरीले सुरु गर्यो अनुसन्धान
प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै ट्वीटर अकाउन्ट असुरक्षित भएको खुलेको छ । प्रधानमन्त्रीको ट्वीटर अकाउन्ट दुरुपयोग भएको पाइएपछि प्रहरीले गम्भीर अनुसन्धान सुरु गरेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
ट्वीटर अकाउन्ट दुरुपयोग सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीमाथि समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले नेपाल प्रहरीलाई जिम्मा लगाइएको हो । घटना सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीअन्तरगतको साइबर ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका आइटीविज्ञ अली असगरले शनिबार बिहान ११ बजे नै घटना सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न सम्पूर्ण डाटा ब्युरोलाई जिम्मा लगाइएको बताए । प्रधानमन्त्रीको ट्वीटर ह्यान्डल प्रधानमन्त्री बाहेक सञ्चारविज्ञ रामशरण बजगाईंले चलाउँछन् ।
त्यसबाहेक ट्वीटरको पासवर्ड प्रमुख सल्लाहकार विष्ण रिमाल र आइटीविज्ञ अली असगरलाई थाहा छ । उनीहरुबाट ट्वीटर दुरुपयोग भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छैन । तर, प्रहरीको अनुसन्धानले सचिवालयभित्रकै एक आइफोनबाट ट्वीटर दुरुपयोग भएको देखाएको छ ।
घटना सम्बन्धमा आइटीविज्ञ असगरले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको ट्विटर ह्यान्डल आइफोन र एन्ड्रोइड दुवै डिभाइसबाट हुन्छ । कुनबाट दुरुपयोग भयो, त्यस सम्बन्धमा अहिले नै भन्न गाह्रो छ । घटना संवेदनशील छ । जटिल पनि उत्तिकै छ । त्यसो हुँदा अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई भनेका छौँ ।’
घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको साइबर ब्युरो भने अनुसन्धानका सम्बन्धमा खुल्न चाहेन । ब्युरो प्रमुख डिआइजी विकास श्रेष्ठले सञ्चारमाध्यममा आएका खबरका आधारमा सामान्य तवरले अनुसन्धान भइरहेको बताए ।